မေလ ၁၈ရက်နေ့မှာ Comeback Album အသစ်လေးကိုထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာ အခုဆိုရင် မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကိုအောင်မြင်ကျော်ကြားနေပါတယ်။ BTS ရဲ့ Comeback Album လေးဖြစ်တဲ့ `Love Yourself: Tear´ ဟာဆိုရင် မေလ၁၈ရက်နေ့ ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီမှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ည၁၀နာရီ ဝန်းကျင်မှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၁၀မီလီယံအထိကိုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မေလ၁၉ရက်နေ့ မနက်၂နာရီအချိန်မှာတော့ ကြည့်ရှုသူ သန်းပေါင်း၂၀အထိကို များပြားခဲ့ပါတယ်။ Youtube မှာ နာရီပိုင်းအတွင်း Viewer Rating အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Kpop Idol Group ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ BTS ရဲ့ Comeback Album ထဲမှ `Fake Love´ ဆိုတဲ့ Music Vedio လေးဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် ယနေ့ မေလ၂၂ရက်နေ့ မနက်၅နာရီအချိန်မှာပဲ Viewer ပေါင်းသန်း၇၀အထိကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ YouTube မှာအချိန်၃ရက်နဲ့ ၁၁နာရီအတွင်း Viewer သန်းပေါင်း၇၀အထိ ရရှိခဲ့တဲ့ Music Video လေးရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာဆိုရင် အခုဆိုအရမ်းကိုအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ Kpop Idol Group လို့တောင်ပြောလို့ရနေပါပြီ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ YouTube ရဲ့ Top 10 24-Hours MV Record မှာ ကြည်ရှုသူ ၃၅.၉မီလီယံနဲ့ နံပတ်၃နေရာကိုရရှိခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးသော Kpop Group လေးအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘဲ ယခင်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ BTS ရဲ့ DNA သီချင်းလေးကလည်း နံပတ်၉နေရာမှာရပ်တည်လို့နေပါတယ်။ DNA သီချင်းလေးကလည်း ၁၁ရက်နဲ့၁၂နာရီအကြာမှာ Viewer ပေါင်းသန်း ၇၀ကျော်အထိဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Music Video လေးပါ။ အခုလို Rating အများကြီး ရရှိနေတဲ့ Fake Love သီချင်းလေးကို BTS အဖွဲ့က Billboard Music Awards ပွဲလေးမှာ စင်မြင့်ထက်တွင် ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ Love Yourself: Tear Album လေးကိုတော့ မေလ၂၄ရက်နေ့မှာ Special Comeback Show အဖြစ်နဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ..
ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပြောပါရစေရှင့်။ BTS အဖွဲ့ရဲ့ Billboard Music Awards 2018 ပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Google မှာမေလ၂၀ရက်နေ့အတွင်း Search Times ၂သန်းအထိရှိခဲ့တဲ့ အတွက် Google’s Trending Searches မှာ နံပတ်တစ်နေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ BTS အဖွဲ့ဟာ BBMAs ပွဲမှာ Top Social Artist Award ကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီဆုကို BTS အနေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ BBMAs ပွဲလေးမှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ BTS တို့ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားတယ်နော်။
ကဲ…. BTS Fan လေးတွေရေ Fake Love သီချင်းလေးနားထောင်ပြီးပြီလားဗျို့…။? ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ မေလ၂၄ရက်နေ့မှာ BTS ရဲ့ Special Comeback Show ကြည့်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြနဲ့ဦးနော်။
PREVIOUS POST Previous post: Billboard Music Awards ရဲ့ Winner Full List
NEXT POST Next post: Selena နဲ့ Taylor တို့နှစ်ဦးဟာ ခုချိန်ထိ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေပါ